မဒေါင်းလုပ် Secret Neighbor မအဘို့ Windows
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (2764.80 MB)
မဒေါင်းလုပ် Secret Neighbor,
Secret Neighbour သည် PC ကွန်ပျူတာနှင့် mobile တို့တွင် stealth ထိတ်လန့်ထိတ်လန့်သောကစားသမားများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Secret Neighbour ကို Download လုပ်ပါ
Secret Neighbor သည်အလွန့်အလွန်များပြားသောလူမှုရေးထိတ်လန့်မှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအုပ်စုတစ်စုသည်သူတို့၏မိတ်ဆွေများကိုအိမ်နီးချင်း၏လှိုင်းထနေသောမြေအောက်ခန်းမှကယ်တင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများထဲမှအိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Secret Neighbor သည်ကစားပွဲအတွက်လူမှုရေးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပြီး Hello Neighbor နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် Hello Neighbor အိမ်ကိုလေ့လာပါ၊ သို့သော်သတိထားပါ၊ သူတို့ထဲကတစ်ခုအသှငျပွောငျးအတွက်အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူလှုပ်ရှားပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းကိုမြေအောက်ခန်းမှကယ်တင်ပါ။
6 ကစားသမား 1 လူကြမ်း: သင်၏ပါတီသည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ အိမ်အနှံ့လှည့်လည်။ မြေအောက်ခန်းတံခါးကိုသော့ဖွင့်ရန်သော့များကိုစုဆောင်းသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာ; သင်တို့ထဲကတစ်ယောက်ဟာအိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊
ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေနှင့်ကစားပါ - အသင်းဖော်များနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပါ။ အတူတူနေပါ၊
အိမ်နီးချင်းအဖြစ်ကစားပါ - ကျူးကျော်သူများကိုရပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့၊ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကိုသွားပါ၊ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုအိမ်နီးချင်းကတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပါ။ သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်လုံခြုံစွာနေရမည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ မြေပုံကိုမျက်လုံးပိတ်ပြီးသွားလာရန်သင်အတွေ့အကြုံရှိပါသလား။ အခန်းအယ်ဒီတာကိုရွေးချယ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဝင်္ကပါဖန်တီးပါ။ ထို့နောက်သူငယ်ချင်းများကိုကစားရန်ဖိတ်ပါ။
သင်၏ Windows PC ရှိ Secret Neighbor ဂိမ်းကိုကစားရန်လိုအပ်သည့် Hardware ကို Secret Neighbor နိမ့်ဆုံးနှင့်အကြံပြုထားသော system requirements အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အနည်းဆုံး system ကိုလိုအပ်ချက်များကို
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ - Windows7နှင့်အထက် 64-bit ပရိုဆက်ဆာ
ပရိုဆက်ဆာ: Intel Core i5-3330 3.0 GHz, AMD FX-8300 3.3 GHz
ဗီဒီယိုကဒ်: NVIDIA GeForce GTX 760, Radeon R9 270
DirectX: ဗားရှင်း 11
Network: Broadband အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု
သိုလှောင်မှုနေရာ - ၅ GB ရှိနိုင်သည်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ - Windows 10 64-bit ပရိုဆက်ဆာ
ပရိုဆက်ဆာ: Intel Core i5-4690 3.5 GHz, AMD Ryzen-3 1300X 3.5 GHz
မှတ်ဉာဏ်: 8GB RAM
ဗီဒီယိုကဒ်: NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 580
မဆက်စပ် Apps များ: မဒေါင်းလုပ် Hello Neighbor 2
Secret Neighbor မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 2764.80 MB
တီထွင်သူ: tinyBuild LLC
Vindictus သည်သင်ကစားကွင်းတွင်အခြားကစားသမားများနှင့်တိုက်ခိုက်သော MMORPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
Necken သည်လှုပ်ရှားမှု -...
DayZ သည် MMO အမျိုးအစား၌ online role-playing game တစ်ခုဖြစ်ပြီးကစားသူများသည် zombie apocalypse...
ELEX သည် Gothic series ကဲ့သို့အောင်မြင်သောအခန်းကဏ္ဂိမ်းများကိုအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သောအဖွဲ့မှတီထွင်ထားသော...
Ultima Online သည် ၁၉၉၇ တွင်ပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သော MMORPG...
The Elder Scrolls Online သည် MMORPG အမျိုးအစား၌အွန်လိုင်း RPG တစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာ၏ရှေးအကျဆုံး...
Warlord Saga သည်မတူညီသောတရုတ်အင်ပါယာသုံးနိုင်ငံမှစစ်သည်တော်တစ် ဦး...
Rappelz သည်တူရကီ MMORPG...
Genshin Impact သည် PC နှင့်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားသူများနှစ်သက်သော anime action rpg ဂိမ်းဖြစ်သည်။ miHoYo...
မှတ်ချက်။ ။ The Elder Scrolls Online ကစားရန် Morrowind ချဲ့ထွင်မှုအထဲမှာမင်းရဲ့ Steam account မှာ...
New World သည် Amazon Games မှတီထွင်ထားသောအလွန်များပြားသောအခန်းကဏ္ playing မှကစားသောဂိမ်းဖြစ်သည်။...
Creativerse သည် Minecraft...
The Witcher 3: Wild Hunt သည် RPG အမျိုးအစား၏အအောင်မြင်ဆုံးဥပမာများဖြစ်သော The Witcher series...
Cabal Online သည်ဒီပွဲမှာ MMORPG...
Conarium ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ခုနှင့်ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊...
အစီအစဉ်တွင်အခမဲ့ကစားနိုင်သော MMORPG များစွာရှိသည်မှာမှန်သည်။ ၎င်းသည် Steam...
Runescape သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံး MMORPG ဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည့်အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ role...
Guild Wars2သည် War of World ၏ Warcraft ၏အကြောက်ရဆုံးပြိုင်ဘက်များထဲမှဖြစ်ပြီး Diablo နှင့် Diablo...
Never Again ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး FPS...